Sida looga caawiyo xayawaankaaga inay ka adkaadaan cabsida xayawaanka | Ragga Stylish
Xayawaan badan oo xayawaan ah ayaa aad uga baqa xayawaanka xoolaha, cuqdad dhibaato keeni karta. Marka laga hadlayo eeyaha, markay tahay inay tagaan si ay u hubiyaan caafimaadkooda, way qaniini karaan, ciyi karaan, ciyi karaan, iyo waxyaabo kale oo badan.
Cabsida xayawaankaaga ee xayawaanka xoolaha waxay ku xirnaan doontaa arrimo badan. Mid ka mid ah waa dabeecadda xayawaanka.
1 Maxaa looga baqayaa dhakhtarka xoolaha?
2 Tilmaamo waxtar leh oo ka dhan ah cabsida xoolaha
3 U wad dhakhtarka xoolaha
4 Waa inaad muujisaa deganaan
Maxaa looga baqayaa dhakhtarka xoolaha?
Aaway cabsidaan dhakhtarka xoolaha ka imaanaysa ee ka dhigi karta xayawaankaaga inay ku dhex kaadi Mabda 'ahaan ma fahmin inay tahay arin caafimaad. Kaliya waxay arkaan inay urka halkaas kureysa wax la yaab leh, waa dad aan aqoon cidda taabata, waxaana jira xayawaanno kale oo la yaab leh.
Tilmaamo waxtar leh oo ka dhan ah cabsida xoolaha
Booqashada rugta caafimaadka xoolaha waa inay noqotaa mid gaaban oo soo noqnoqota. Habkaas, xayawaankaaga ayaa la qabsan doona khibradduna ma noqon doonto mid xun. Haddii aad agtiisa ku dhaafto rugta caafimaadka xayawaankaaga oo aad gasho, xitaa haddii ay tahay uun in la yiraahdo hello, taasi waxay abuureysaa tusaale.
Waqtiga ugu fiican eeygu la qabsado dhakhtarka xoolaha waa marka uu eey yahay. Eydu waa inay tagaan rugta caafimaadka ma aha oo keliya markay la tashanayaan, laakiin sidoo kale si joogto ah.
Ka soo qaad in aad xayawaankaaga xayawaankaaga ah iyo tan la gashay rugta caafimaadka ku hesho daaweyn aad jeceshahay. Sidan oo kale, waxaad kula xiriiri doontaa soo galitaanka rugta daqiiqad wanaagsan.
U wad dhakhtarka xoolaha
Haddii aad xayawaankaaga xayawaan ah ku qaadatid baabuur xayawaanka, oo isagu isagu ma jecla gaariga, waayo-aragnimada ayaa xitaa ka sii xumaan doonta. Maxaa intaa ka badan, booqashada waxaad ku xiriirin kartaa dhakhtarkaaga gaariga. Waxayna ku saabsan tahay in laga fogaado tan.
Waxa ugu fiican ayaa ah in la sameeyo, waqti ka waqti, safarada yaryar ee baabuurka leh xayawaankaaga. Si aad ula qabsato.
Waa inaad muujisaa deganaan
Haddii milkiilaha xayawaanku aanu muujin degganaan, way ku adag tahay xayawaanka inuu dego. Saaxiibkaa had iyo jeer wuu ku ilaaliyaa, taasina waxay siisaa dareeno kala duwan.
Ilaha sawirka: Ogaanshaha eeygayga / VIX
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Waqtiyada firaaqada » Waxa la sameeyo haddii xayawaankaaga xayawaanka ahi ka baqaan xayawaannada
Lix blazers oo laba-laabanleyaal ah deyrta / jiilaalka